Nhau - NDAA inoenderana zoom block kamera
Wona Sheen inogona kupa NDAA inoenderana zoom block kamera.
Wona Sheen Mstar zoom block kamera ari 100% NDAA inoenderana.
Kana iwe wakambonzwa nezveUSA rondedzero yezvigadzirwa zvakaita seHikvision, Dahua naHuawei, saka ungangodaro wakambofunga kutarisa zoom block kamera isingashandisi iyo Huawei Hisilicon chip yakatarwa. Wona Sheen inogona kusangana nezvaunoda.
Chii chinonzi NDAA Kuteerera?
John S. McCain National Defense Authorization (NDAA) mutemo weUnited States unotsanangudza bhajeti, mashandisirwo uye marongero eUS department reDziviriro. Kwegore reMari 2019, iyo NDAA Chikamu 889, inorambidza hurumende yeUS kutenga michina yevhidhiyo neterevhizheni kubva kumamwe makambani eChinese uye ma subsidiary
Iva Nehanya neOEMs kana Re Yakanyorwa Zvishandiso
Nekuti makamera mazhinji uye zvimwe zvigadzirwa zvekutarisa zvakanyorwa zvakavanzika (OEM) zvinogona kunetsa kutaura kana chakakosha mudziyo chakarambidzwa, zvichibva pazita rezita.
Vagadziri vaviri vakuru vari pane rakarambidzwa runyorwa ndiHikvision uye Dahua. Nekudaro, yega yega inotengesa kune akawanda maOEMs, ayo anonyora zvigadzirwa nemazita ezita ravo.
Kana iwe uchitsvaga NDAA inoenderana neyekuchengetedza michina, inogona kuda kumbotsvagurudza uye inosanganisira kubvunza nezve zvakarambidzwa zvinhu zvakare. Semuenzaniso, Huawei inogadzira zvinhu zviri pane zvakarambidzwa runyorwa uye ivo vanopa chip seti kune akawanda makamera vagadziri.
Wona Sheen inoenderana nemakamera, usashandise chero chinhu kubva kune vanotengesa. Bata sales@viewsheen.com kuti uwane ruzivo.